पॉली कार्बोनेट पाना प्रादा आर्ट टावरमा लागू गरियो: फेसन मिलानको गिरगिट" - YUYAO JIASIDA SUN PET CO।, लिमिटेड
पॉली कार्बोनेट पाना प्रादा आर्ट टावरमा लागू गरियो: फेसन मिलानको गिरगिट"
समय: 2018-09-25 हिट्स:
पॉली कार्बोनेट पाना प्रादा आर्ट टावरमा लागू गरियो: फेसन मिलान s 's "गिरगिट"
मिलान – रेम Koolhaas र रोटरडम मा उनको वास्तु फर्म, OMA, प्रादा फाउन्डेशनको लागि कला प्रदर्शनी ठाउँ डिजाइन – एउटा नयाँ टावर जुन एक नरम चमकलाई माथि पार्दछ, केवल गिरगिटहरू जस्तो.
पूर्वबाट, पातलो, अघोषित, क्रीम सेतो क concrete्क्रीट भवन नौ तल्ला अग्लो छ र धेरै बालकनीहरू खोल्छ – यो एक संकेत पोस्ट हुन्छ, परम्परागत गाउँमा घण्टा टावर जस्तै, तल्लोबाट बौने घरहरू जमिनबाट माथि उठिरहेका छन्.
उत्तरमा, भवन fçade मिलानको स्काईलाइनमा मर्ज हुन्छ. भित्ताहरू सिसाबाट बनेका छन् र सडकमा क्यान्टिलवेर्ड छन्. बिभिन्न फ्लोरको फ्लोर समानन्तरोग्राम र अनियमित चतुर्भुजको बीच रूपान्तरण हुन्छ. Zigzag विभाजित छ र पूरै भवन त्रिकोणीय खण्डमा खस्छ.
दक्षिण पक्षले एकै नजरमा निर्माण भवनहरू बनाउँछ. ठूलो बीममा धेरै ठूला इस्पात केबुलहरू हुन्छन् जुन ओभरह्यानिंगले उत्पन्न गरेको थ्रस्ट समावेश गर्दछ, भारी कंक्रीट स्लैब. यो किरण ढु a्गामा राखिएको तरवार जस्तै हो, भवनको माथिबाट तल झुकाव, यसको छेउमा रहेको पुरानो गोदामको रातो टाइल छतबाट, जमीनमा लंगर.
एउटै समयमा, एक धेरै आधुनिक अनुकूल पारदर्शी पॉली कार्बोनेट प्लेट यहाँ प्रयोग गरीन्छ, र एल्युमिनियम ह्यान्ड्राइलहरू फरारी कारहरू जस्तै समान स्तरमा पोलिश गरियो. त्यहाँ ओक प्याभ स्ल्याबहरू र अन्य प्रयोगहरूको लागि पेन्टेड ग्रीन मेटल जेल फेंसहरू पनि छन्, जुन डिपॉजिटरीको स्क्रिन हुन्छ र शौचालयको डिब्बा हुन्छ.
अघिल्लो : धैर्य बोर्ड को सफाई र रखरखाव को रहस्य.
अर्को : पोलीकार्बोनेट: इन्जिनियरि pla प्लास्टिक